Tag: yelp app -ka gacanta | Martech Zone
Tag: yelp moobaylka
Marka laga eego aragtida suuqleyda, waxaan runtii aaminsanahay in xaqiiqda la kordhiyay ay leedahay wax badan oo ka karti badan xaqiiqda dhabta ah. In kasta oo xaqiiqda dhabta ahi ay noo oggolaan doonto inaan la kulanno waayo-aragnimo gebi ahaanba macmal ah, xaqiiqda la kordhiyay ayaa kobcin doonta oo la macaamili doonta adduunka aan hadda ku nool nahay. Waxaan horay u wadaagnay ka hor sida ay AR saameyn ugu yeelan karto suuq-geynta, laakiin ma aaminsani inaan si buuxda u sharraxnay kordhinta. xaqiiqada iyo tusaalooyinka la bixiyay. Furaha suurtagalnimada suuqgeynta waa horumarka casriga